အကောင်းဆုံး Roll Machine တွင် Coreless အိတ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် Roll Machine တွင် Coreless အိတ် စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
ပုံစံ - STR-VC Series
အော်တို-လိပ်ပြုလုပ်သည့်စက်တွင် Dual Fold Coreless ဖြင့် အောက်ခြေအလုံပိတ် အပေါက်ဖောက်ခြင်းအမှိုက်အိတ်ကို ပြောင်းပါ။(ဆာဗိုကုမ္ပဏီ-မြန်နှုန်းစနစ်)
၌-line auto package ဖြစ်နိုင်တယ်။
ပါဝါမော်တာရွှေ့ခြင်းဖြင့် ပုံစံ ၃ မျိုးဖြင့် ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် ခေါက်ရိုးတံကို လွယ်ကူစွာ ပြောင်းလဲပါ။.
၌-line Robot အလုပ်လုပ်သည့်ဘူတာ သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် ပက်ကေ့ခ်ျ လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်နိုင်သည်။. (ရွေးချယ်ခွင့်)
STR-680VC-RB3S ၁ x ၃၈၀~680
STR-850VC-RB3S ၁ x ၅၄၀~850
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/coreless-bag-on-roll-machine.html
အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်အဖြစ် Taiwanကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်း Roll Machine တွင် Coreless အိတ် ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ အကျိုးရှိစွာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူထုတ်ကုန်များနှင့် applications တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ In-နက်နက်နဲနဲသိကျွမ်းစဉ်အကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်ပေးသွင်းသူများနှင့်အတူရေရှည်တည်တံ့သောထုတ်ကုန်များတည်ဆောက်စေခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ကို enable ။ ထုတ်ကုန်များနှင့် impeccable န်ဆောင်မှုကျွန်ုပ်တို့၏အကွာအဝေးအသစ်သောမြင့်မားကျွန်တော်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း leaded ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အကောင်းဆုံး Roll Machine တွင် Coreless အိတ် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Taiwan မှစက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ချိသူ၊ OEM နှင့် ODM တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။